Umhlaba Hole Digger, Hole Machine Earth, Log Splitter - Dongheng Imishini
I-KINGER earth auger drive yathuthukiswa ekuqaleni kokusungulwa kweYantai Dongheng Machinery Co, Ltd. Kuze kube manje, sinolwazi oluningi lokukhiqiza nokuthengisa kulo mkhakha.Ngemodeli esezingeni eliphakeme nobubanzi obubanzi, senza uphawu lwe-KINGER lwaziwe kahle emakethe.Funda kabanzi
I-KINGER cone log splitter yamahlathi iyashintshashintsha ukuthi ifakwe kumbiwo, i-skid steer, i-backhoe loader njll Kuphephe ukwedlula i-hand log splitter njengenjwayelo.Ukwenza lukhuni ukwelashwa okukhethekile nge-screw cone kusho ukuthi kuzobonisa ukusebenza kanzima nokubukhali nokusebenza kahle ngesikhathi ukugawula izinkuni.Funda kabanzi
I-KINGER ibone ikhanda lisebenzisa izinto ezikhethekile zokusetshenziswa kanye namagiya aseplanethi, anokusebenza okuphezulu kanye nempilo ende.Ingaphinde inyuse ngempumelelo ukusebenza kwamahlathi.Funda kabanzi
Yantai Dongheng Imishini Co., Ltd
Singa Emhlabeni jikelele
Ikhwalithi Amasiko ethu
Isevisi eku-inthanethi yamahora angama-24
I-Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. yasungulwa ngo-2010 futhi yaba yisikhundla esiphambili kumishini yokunamathisela i-excavator ngokuhamba okusheshayo. Inkampani yethu isidlulile ukuqinisekiswa kwe-ISO9001: 2015 ne-CE Singabantu kazwelonke zobuchwepheshe ibhizinisi mkhakha, ehlukile kanye emisha. Inkampani yethu inamalungelo empahla yengqondo ezimele. Kuze kube manje, sesithole amalungelo obunikazi angaphezu kuka-30. Lokho kwenza iDongheng ibe yindawo ehamba phambili embonini yemishini yokwakha yaseChina.
I-Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. izibophezele ku-R & D, ekwakheni nasekuthengiseni okunamathiselwe kwe-excavator kokwakhiwa, ezolimo nezamahlathi imishini. I-KINGER main business ine Mini excavator, Earth auger, Log splitter, Log grapple, Saw head, Mixer bucket, Mixer bowl, Hedge trimmer, Chain trencher, Tree shear, Stump planer, Hydraulic hammer, Quick coupler, Shanela ibhulashi neminye imishini yokwakha futhi okunamathiselwe.
Umkhiqizo wethu usebenzisa ubuchwepheshe obuphakeme nobusha, busetshenziswa ngezinto ezinhle kakhulu futhi kusekelwa imishini ehlukahlukene yokuhlola nokuhlola ukwenza isiqiniseko sokuthi ikhwalithi izinzile nokusebenza kuhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, siqinisekisiwe umphakeli wegolide ku-Alibaba.Singaletha izimpahla ngo-100% ngesiqinisekiso sesikhathi.
Sinikeza ukusekelwa okuphelele kwamahora angama-24 kwezobuchwepheshe kanye nensizakalo eku-inthanethi Ngenxa yokuthi sineqembu lethu le-R & D, uma udinga usizo oluthile emkhakheni wezobuchwepheshe, singakusiza. Uma unemibuzo ngemuva kokuthenga noma imiphi imikhiqizo yethu, sicela ungangabazi ukusishiyela umlayezo. Sizokuthinta ngokushesha okukhulu ngemuva kokuhlola.